July 18, 2021 - Celegroup
သင်တန်ဖိုးထားသူကို မဆုံးရှုံးချင်ရင် ဒီအရာတွေသိထားဖို့လိုမယ်
July 18, 2021 cele group 0
သင်တန်ဖိုးထားသူကို မဆုံးရှုံးချင်ရင် ဒီအရာတွေသိထားဖို့လိုမယ် လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဝေးသွားမှာပဲ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက် နားလည် နားလည် လေးစားမှု မရှိရင် နားလည်မှု ပြိုကွဲမှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘယ်လောက်ပဲ လက်တွဲခဲ့ ပွင့်လင်းမှု မရှိ ခဲ့ရင် ကြိတ်လုံးတွေ ထပေါက်ကွဲ မှာပဲ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ် လောက်ပဲ […]
OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင်ဘာမှစိတ်ဓာက်မကျပါနဲ့ အသိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြလို့ခုဆိုရင်လူဦးရေ(၉)ယောက်ထိသက်သာသွားပါပြီ ( မယုံရင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်ပါ ) ဘာမှစိတ်ဓာက်မကျပါနဲ့OXYGEN လုံးဝမရခဲ့ရင်ကွမ်းရွက်ကို လက်တစ်ဆုတ်စာဖြစ်ပြီးရူပေးပါ (အောက်ဆီဂျင်)60/လောက်ကျနေသာတောင်ပြန်ကောင်းလာတာတွေ့နေရပါပြီ… ရူပြီးနောက်(ချွဲသလိပ်၊နှပ် ၊တွေ)ထွက်လာပြီး ၊လေဝင်၊လေထွက်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်… အသိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြလို့ခုဆိုရင်လူဦးရေ(၉)ယောက်ထိသက်သာသွားပါပြီ… မှတ်ချက် ဖျားချင်နေပြီ / ဖျားနေပြီ/ခေါင်းကိုက်နေရင်/အနံ့မရလျှင် ရေနွေးအိုးထဲကို ကွမ်းရွက် ( ၅ )ရွက် ငရုပ်ကောင်းစေ့ (၅ )စေ့ ဂျင်းပါးပါးလှီး (၅ )ပြား လ္ဘက်ခြောက်ခပ်သလိုသောက်ပေးပါ(ရူပေးပါ) အထက်ပါ (၉)ဦးထဲမှအနံ့ပျောက်သူ(၃)ဦးလဲ ကွမ်းရွက်ကိုလက်တဆုတ်စာချေပြီရူပေးလို့ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်… အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ… […]
ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာဖို့ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ဆားရေစိမ်နည်း အမျိုးမျိုး
ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာဖို့ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ဆားရေစိမ်နည်း အမျိုးမျိုး ဆားရေစိမ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တင်ပါးနှင့်ပေါင်များကို ရေနွေးနွေးတွင် စိမ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းရှိ ညောင်းညာခြင်း၊ကိုက်ခဲခြင်း၊မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေသော နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးမရှိပဲ အိမ် မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်လို့ ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် ညွန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ (၁)မူလလက်ဟောင်း ဆားရည်စိမ်ခြင်း ဆားသည် သဘာဝ ပိုးသတ်အာနိသင်ရှိတဲ့အပြင် အနာများကို ကျက်စေသောအစွမ်းရှိပါတယ်။ဆားရည်စိမ်ခြင်းကို ဖန်ရည်စိမ်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ကြပြီး လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိသူတို့အတွက်လည်း အလွန်အသုံးဝင်သောနည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခံနိုင်သလောက် အပူရှိသည့် ရေနွေးတစ်ဇလုံစာတွင် ဆားကို ခွက်တစ်ခုရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံပမာဏခန့်ထည့်ပါ။ထိုဇလုံထဲတွင် […]
ဒီအချက်တွေက သင့်ကိုဆင်းရဲတွင်းထဲ ဆွဲခေါ်နိုင်တယ် (၁) မစဉ်းစားပဲသုံးတယ် ဒီနေ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုက်ဆံသုံးနည်းက နောက် (၁၀) နှစ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ငွေရေးကြေးရေးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် /လိုအပ်တာ နဲ့ လိုချင်တာ ကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ စပြီးဖြစ်စေပါတယ် ဒီတော့ ဒီအချက်ပဲ ကိုယ့်ဘဝ ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ပြသာနာကိုဖြစ်စေပါတယ် (၂) ဘဝ ကို အကြွေးရှိအောင်လုပ်ခြင်း သင် အကြွေးများလာအောင်လုပ်တိုင်းမှာ သင်က ငွေရေးကြေးရေးအဆင့်အတန်းကို တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျအောင် […]
သားသမီးတွေရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းအဆင်ပြေဖို့ ဒီအကျင့်တွေကိုပြင်ပေးပါ
သားသမီးတွေရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းအဆင်ပြေဖို့ ဒီအကျင့်တွေကိုပြင်ပေးပါ ကလေးများဟာ အောက်ပါအကျင့်ဆိုးကြီး သုံးခုကို စွဲကပ်သွားပြီဆိုရင် ဘဝတစ်ခုလုံး ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ မိဘများ အနေနဲ့ အလေးထားပြီး အမြန်ပြုပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ ၁။ မှီခိုလွန်းခြင်း၊ ဦးနောက်မသုံးလိုခြင်း၊ ပြသနာသေးသေးလေးကအစ မိဘကို အကူအညီတောင်းခြင်း။ အချစ်လွန်တော့ အနှစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးများဟာ အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ အစစ အရာရာ လူကြီးကို အားကိုးတကြီး ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပြသနာသေးသေးလေးကအစ ဖြေရှင်းဖို့ မစဉ်းစားဘူး၊ ဦးနောက်သုံးဖို့ လေးဖျင်းနေတတ်တယ်။ လူကြီးကို […]
မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေ တစ်သိန်းမျှကြီးမားသော ကုသိုလ် ယူနည်း တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေ တစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်တွေရရှိသွား နိုင်မည့် နေနည်းများ ၁။ နိုးနိုးချင်း….မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်းနိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲဝင်လေ ထွက်လေလေးကိုသတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာကုဋေတစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့သည့်အတွက် မင်္ဂလာတရားဖြင့်စတင်သည့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဟူသမျှ….အိမ်သာသွားရာ၊ သွားတိုက်ရာ၊ မျက်နှာသစ်ရာတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ၊ သတိကပ်၍ သိနေရန်ကြိုးစားနေလိုက်ကြပါမယ်။ ၃။ […]
နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်
နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ် (၁) မိတ်ဆွေ၊ သင်ဟာ ပင့်ကူကြောက်တက်ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ပင့်ကူတွေဟာ ပူစီနံအဆီကို အရမ်းမုန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပူစီနံ အဆီကို ရေနဲ့ရောပြီး ပင့်ကူသွားတက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကို ဖြန်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် ပင့်ကူတွေဟာ ထွက်ပြေးသွားမှာပါ။ (၂) သင့်ရဲ့ microwave မီးဖိုဟာ ညစ်ပတ်နေပြီး ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သင်တွေးနေပါသလား? ဒါဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ […]
ရေသန့်ဘူးဝယ်တဲ့အခါ သတိထားရမည့် အရာများ
ရေသန့်ဘူးဝယ်တဲ့အခါ သတိထားရမည့် အရာများ ရေသန့်ဘူးတွေ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူလို့ရနေတော့ သတိမထားဘဲ ဒီလိုပဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ သို့သော်လည်း ပလက်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီရေသန့်ဘူးတွေဟာ အမှန်တကယ်ရော စိတ်ချမှု ရှိရဲ့လား အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနို်င်လားဆိုတာကို ဂရုမပြုမိကြပါဘူး ရေသန့်ဝယ်တဲ့အခါ ဘူးရဲ့ အောက်ပိုင်းကို သေချာကြည့်ကြည်ပါ PP , HDPE ,HDP , PET စသဖြင့် စကားလုံးလေးတွေ ပါတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ […]
ဒီနိမိတ်တွေမြင်ရင် သင်ကံကောင်းပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့
ဒီနိမိတ်တွေမြင်ရင် သင်ကံကောင်းပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့ ၁-အိမ်ထဲခြံထဲကိုကြောင်တစ်ကောင်ဝင်လာရင်သတိထားကြည့်ပါကြောင်နက်ဆိုရင်ဒါဟာသစ္စာဖောက်ယုံကြည်မှု အလွဲသုံးခံရမယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပြီးကြောင်ဖြူဆိုရင်အိမ်သားတစ်ယောက်ယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ကြောင်ဝါရွှေဝါရောင် ကြောင်မျိုး ဝင်လာရင်တော့ကံကောင်းတော့မယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ဟာ ဟိုးတုန်းက ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ သတ္တဝါမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂-သွားရင်းလာရင်း လမ်းမှာ မြွေနဲ့ တည့်တည့်တိုးသူတွေ ရှိကြမှာပါ။မြွေကိုမြင်ရတာဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးအရေးပါတဲ့အဖြစ်အပျက် သို့ လူတစ်ယောက်ပေါ်လာမှာကို နိမိတ်ပြတာပါပဲအဆိပ်ပြင်းတဲ့မြွေဖြစ်လေကံပိုကောင်းလေလို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်မြန်မာ့ဗေဒင်ပညာမှာတော့အမျိုးသားဆိုကိုယ့်လက်ဝဲကနေမြွေဖြတ်ရင်ကံကောင်းစေတတ်ပြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်လက်ယာကဖြတ်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မြွေကိုမသတ်ဘဲလွှတ်ပေးလိုက်သင့်ပါတယ် ၃-ကိုယ့်အတွက်နေ့ကောင်းရက်သာလို့သတ်မှတ်တဲ့ နေ့ သို့ ရက်ရာဇာတစ်ရက်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်က မုန့်ဖိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကြွေးပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေးလာခဲ့ရင်အဲဒီငွေကိုသိမ်းထားတာပါအဲဒီငွေဟာကံကောင်းပျော်ရွှင်စေမယ့်လာဘ်ငွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်နေ့ကောင်းရက်သာမျိုးသတ်မှတ်မထားရင်လဆန်း -၁ ရက်ဒါမှမဟုတ်လပြည့်နေ့မှာရလာတဲ့ငွေစက္ကူတွေဟာကံကောင်းစေတဲ့ လာဘ်ခေါ်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ် ၄-မြန်မာ့အယူအဆမှာလျှာကိုက်မိရင်တစ်ယောက်ယောက်ကကိုယ့်အကြောင်းအတင်းတွေပြောနေပြီလို့ ယူဆကြတာ ရှိသလို နိုင်ငံတကာမှာလည်း နားယားရင် အတင်းပြောခံနေရပြီလို့ […]
တီဗီ၊ကွန်ပျူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်း အသုံးများလို့ မျက်လုံးအားစိုက်ရသူများအတွက် မျက်စိအညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
တီဗီ၊ကွန်ပျူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်း အသုံးများလို့ မျက်လုံးအားစိုက်ရသူများအတွက် မျက်စိအညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ တီဗီ၊ကွန်ပျူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်းများ အသုံးများခြင်းဟာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်စိကိုထိခိုက်လာတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မျက်ရည်ပူကျခြင်း၊မျက်စိယားခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရပြီလာ:?ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကို ခေတ္တရပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်စိကြွက်သားများ အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်ပေးရမယ်နော်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁)-အမှောင်ထဲကိုငေးကြည့်ပါ။ -စားပွဲတစ်ခုပေါ်မှာ တံတောင်ဆစ်များကို ထောက်ပါ။ -သင့်မျက်စိ၂ဖက်ကို လက်ဖဝါး ဖြင့်အုပ်ပါ။ -စိတ်ကိုလျှော့ချပြီး အမှောင်ထုကိုခံစားပါ။ -မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ထိုအတိုင်းနေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၂)- မျက်စိကိုဘယ်ညာကစားခြင်း […]
သင့်ဖုန်း အားအမြန်ပြည့်ချင်ရင် ဒီနည်းလမ်းတွေသုံးလိုက်ပါ ဖုန်းတစ်လုံး လက်ထဲမှာ ပိုင်ထားပြီဆိုရင် အဲဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာ မသိမသာ စိုးရိမ်စိတ်လေးတစ်ခု တိုးပွားလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း အားကုန်သွားမှာ စိုးတာပါ။ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို အလျှင်အမြန် အားပြည့်စေချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက် (၇)ခုကတော့ ဖုန်း အမြန်အားသွင်းလိုသူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ဝိုင်ယာလက်စ် (Wireless) အားသွင်းတဲ့စနစ်ကို အသုံးမပြုပါနဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဖုန်းတွေကို Wireless အားသွင်းတဲ့စနစ်တွေ တပ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရှင်တွေရဲ့ […]
အိမ်မှုကိစ္စ လုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကို ထားခဲ့တဲ့ဇနီး…(အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ဖတ်နေရင်း မျက်ရည်တောင် ကျမိပါတယ်) ကျွန်တော့ ဇနီး မှဲ့ကင်ဆာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် တို့ဆီကနေ ထွက်ခွာသွားတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားမိတယ်… အိမ်မှုကိစ္စလုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ သားလေး ကို ထားခဲ့ ရတာ သူဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းနည်းလိမ့်မလဲကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ မိဘ ၂ယောက်စလုံးရဲ့ ဇာတ်ကောင် နေရာကနေကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ကို […]